Charles Taylor oo lagu gacansaydhay racfaankii uu ka qaatay xukunkii hore - BBC News Somali
Charles Taylor oo lagu gacansaydhay racfaankii uu ka qaatay xukunkii hore
26 Sebtembar 2013
Maxkamadda gaar ah ee denbiyada caalamiga ah ee Hague ee qaadaysa dacwadihii Charles Taylor, hoggaamiyihii hore ee dalka Liberia, ayaa ku gacansaydhay maanta racfaankii uu ka qaatay xukunkii hore loogu riday.
Charles taylor, maxkamaddan imiku waxay go'aamisay in sidiisii yahay xukun hore loogu ridey oo ahaa 50 sano oo xabsi ah, bishii hore ee May. Waxana lagu helay markaas inuu gacan ka geystey xasuuq iyo falal ka dhan ah xuquuqda ba'iiaadminimada dalka Sierra Leone, isagoo gacan siiyey jabhadihii halkaasi ka dagaallamayey sannadihii u dhexeeyey 1991 - 2002.
Garyaqaannada haatan daafacaya Charles Taylor, waxay ku doodeen in la sii daayo eedaysanahaasi, sababta oo ah in caddaymaha loo cuskaday xukunka dacwaddii lagu soo oogey, inayna ahayn qaar sax ah oo sugnaa. Hasse ahaatee dacwad-s-oo-oogayaashu waxay dhinacooda isku deyayaan in xataa loo baahan yahay in la sii kordhiyo sanadaha xabsiga lagu xukumay oo la gaadhsiiyo ilaa 80 sano.
Maxkamaddan racfaanka ee maantu waxay sheegtay in xukunkaasi hore uu ahaa mid xaq ah oo si caddaalada ah u dhacay, hasse ahaatee garyaqaannada Charles Taylor waxay ku tilmaameen wax laga xumaado.
Charles Taylor oo da'diisu ay tahay 65 jir waxa la soo qabtay sannaddii 2006, haddii imika la meelmariyo xunkukii horena, waxa uu xabsigaasi ku qaadan doonaa dal debadeed. Dalkan Ingiriiska ayaa hore u aqbalay in lagu hayo mid ka mid ah xabsiyada dalkani. Meelaha kale ee la soo jeedinayo waxa ka mid ah Sweden iyo Rwanda.